Ukuphupha iCarnelian ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neCarnelian
I-Carnelian yi-quartz kwaye yenye yeendlela ekuthiwa zii chalcedony, ezifana nejaspi. Uluhlu lwemibala eyahlukeneyo inemibala eyahlukeneyo ukusuka kumbala omdaka ukuya kupinki kunye neorenji ukuya kobomvu. Kukho iikopi ezimonchrome, ezinemigca, okanye ezincamathelisiweyo.
I-Carnelian yayisele ixabisekile njengelitye eliyigugu kunye nokuphilisa okanye ilitye lamandla kumaxesha amandulo. KumaXesha Aphakathi, ubucwebe be-carnelian babudumile kuba kwakufuneka bukhusele kumlingo. U-Hildegard von Bingen waze wabala i-carnelian phakathi kwamatye okuphilisa abaluleke kakhulu. Kuba kufanelekile ukuba ibhekane nentloko ebuhlungu, ukopha kunye nokubanda. Kukwathiwa iyayomeleza inkqubo yomzimba yokuzikhusela.
Kodwa inokuthetha ntoni i-carnelian njengophawu lwephupha? Unokufumana ukuba ngowuphi umyalezo onokukugcina kwinqaku elilandelayo.
1 Uphawu lwephupha «iCarnelian» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «iCarnelian» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iCarnelian» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iCarnelian» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Uhlalutyo ngokubanzi lwephupha lubona kumfanekiso wephupha "uCarnelian" ikakhulu isibonakaliso samandla othando. Ukuphupha kufuneka kubonise ngephupha lakho ukuba unalo elikhulu ngenxa yeemvakalelo zakho ebomini bokuvuka. amandla angaphakathi kwaye uyakwazi ukuyisebenzisa.
Nabani na obiza i-carnelian impahla yakhe ephupheni lakhe uya kuthi kungekudala afezekise udumo kunye nembeko kuyo el mundo yomlindo. Ukuba umphuphi unikwe into eyenziwe nge-carnelian ngelixa elele, kunokwenzeka ukuba kungekudala ezinye iinguqu ebomini bakhe zisondele.
Ukunxiba ubucwebe be-carnelian njengophawu lwephupha kunokuhlala kulumkisa ngokuchasene nokujonga ngaphezulu. Ukuthozama kunye nokuziphatha okuncinci kuya kufaneleka ngakumbi.
Ukuba ufumana i-carnelian ephupheni, unokulindela ngokubanzi ukukhula okuqinisekileyo kwihlabathi lokuvuka. Ukuphulukana nelitye elinjalo, kwelinye icala, kunokubangela ukuthotywa kunye nokuthukwa.
Uphawu lwephupha «iCarnelian» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, i-carnelian ingasetyenziselwa ukulala ukuya Amistad kunye nokuma kwezempilo. Nabani na ombonayo ephupheni lakhe kufuneka aqonde ukuba unesibindi kwaye ujonge kwikamva ngokuzithemba.
Ukuba unxiba iringi nge-carnelian emnweni wakho ngelixa ulele, uthembekile kwaye uthembekile kubudlelwane phakathi kwabantu. Ikhonkco eline-carnelian pendant lihlala lifanekisela umfanekiso wephupha. umsebenzi wasekhayaoko kuthathwa njengomthwalo kwaye umntu ophuphayo uya kujongana nesibindi.
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, umbala we-cornelian nawo udlala indima ebalulekileyo emaphupheni. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuyilo. Uphawu lwephupha "imibala" lunokuba luncedo.
I-carnelian ebomvu inokusetyenziswa njengophawu lokuphupha ukukhumbula igazi kwaye ke Amandla obomi bhekisa ephupheni. Ebomini bokuvuka, kuya kufuneka uthathele ingqalelo into ongathanda ukubeka kuyo amandla akho.
Uphawu lwephupha «iCarnelian» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, ukuphupha kufumana uphawu lwephupha "i-cornelian" isicelo sokuvumelana nayo Ukuqonda uthando dibana ne. Kwilizwe elivukayo, kuya kufuneka uqaphele ukuba ungayibonisa njani le nto kwabanye.
Iphupha malunga neentlobano zesini